Sunglasses, macaps uye ma watches evarume The Indian Face - THE INDIAN FACE
Iko kuunganidzwa kwedu kwezuva magirazi evarume nevakadzi akaumbwa nemhando dzakasiyana siyana dzemhando uye mavara. Magirazi emeso polarkusimuka yemhando ipi neipi yemamiriro uye Ultra mwenje mwenje kwekunzwa kuri nani.
Magirazi emitambo yekumhanya, bhasikoro, ski kana kuita chero chero mutambo. The ma lenses anochinjika uye maviri akasiyana anosanganiswa: imwe yemazuva ane zuva uye imwe yemamiriro akashata
Tsvaga muunganidzwa wedu wemakepisi yakagadzirwa uye yevadi vekunze uye yevatambi mitambo. Kufuridzirwa nemitambo iyo inonyanya kutizivisa. Marori marita ekukuperekedza chero kwaunoenda. Unozviratidza sei?
ONA ZVESE CAPS
MaJapan mawartz quartz akagadzirwa natenzi wedu wachi wachi. Mhando dzakasiyana dzemhando uye mavara ezvese zvido. Ivo vakakwana kune varume nevakadzi uye vanopa yakasununguka uye isina hanya maitiro.
ONA ZVESE ZVONYANYA
Yedu ski uye snowboard goggles yakagadzirwa ne uye ne freeriders. Yepamusoro hunyanzvi hwekuita kuti uve nechokwadi chekuita kwakanyanya uye kuvimbika kwakanyanya mumamiriro akaipisisa panguva yeFreeride tsika.
ONA ZVESE MASKI